GNOME 41 wuxuu la yimaadaa dib -u -habeyn dib -u -habeyn, guddiyo, barnaamijyo iyo inbadan | Laga soo bilaabo Linux
GNOME 41 wuxuu la imanayaa dib -u -habeyn dib -u -habeyn ah, guddiyo, barnaamijyo iyo waxyaabo kaloo badan
Xulka wararka oo dhan | 22/09/2021 10:17 | La cusbooneysiiyay 23/09/2021 00:32 | Aplicaciones
Kadib lix bilood oo horumar ah daahfurka nooca cusub ee deegaanka desktop-ka GNOME 41 taas oo la timaada tiro aad u badan oo isbeddello muhiim ah kuwaas oo ay ugu mudan yihiin in la is tuso tusaale ahaan ballaarinta suurtogalnimada habaynta isticmaalka tamarta.
Awoodda si dhaqso leh loogu beddelo habka isticmaalka awoodda waxaa lagu bixiyaa menu maaraynta xaaladda nidaamka. Araajidu waxay awood u leeyihiin inay codsadaan hab adeegsi koronto oo gaar ah; tusaale ahaan, ciyaaraha xasaasiga ah ee wax-qabadku waxay codsan karaan hab wax-qabad sare si loo hawlgeliyo.
Arrin kale oo cusub oo la soo bandhigay ayaa ah ikhtiyaarrada cusub si loo habeeyo habka keydinta awoodda, oo kuu oggolaanaya inaad xakamayso hoos -u -dhaca shaashadda, xidh shaashadda ka dib muddo cayiman oo aan firfircoonayn isticmaale, oo si otomaatig ah u dami marka baytarigu yaraado.
Taas ka sokow interface -ka si loo maareeyo rakibidda codsiyada ayaa dib loo habeeyay, taas oo sahlaysa marin -habaabinta iyo raadinta barnaamijyada xiisaha leh. Liisaska arjiga waxaa loogu talagalay inay yihiin khariidado sharraxaad badan oo leh sharraxaad gaaban. Qaybo cusub oo cusub ayaa la soo jeediyay si loogu kala qaybiyo codsiyada mawduuc.
Iyo sidoo kale Bogga leh macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan arjiga ayaa dib loo qaabeeyey, kaas oo lagu kordhiyay xajmiga shaashadaha oo la kordhiyay macluumaadka macluumaadka ee codsi kasta. Intaa waxaa dheer, qaabaynta goobihii iyo liisaska barnaamijyada iyo barnaamijyadii hore loo rakibay ee ay jiraan cusboonaysiinta ayaa dib loo qaabeeyey.
Dhinaca kale, waxaan ka heli karnaa taas guddi cusub oo dhinacyo badan leh ayaa lagu daray habeeyaha (Xarunta Xakamaynta GNOME) si loo habeeyo daaqadda iyo maaraynta miiska.
Gaar ahaan, qaybta Multitasking, ikhtiyaarrada ayaa la bixiyaa si loo joojiyo wicitaanka qaabka guud taabashada geeska bidix ee kore ee shaashadda, dib -u -cabbiridda daaqadda adoo u jiidaya geeska shaashadda, xulashada tirada miisaska miisaska leh, ku muujinta miisaska dusha kormeerayaasha ku xiran, iyo kala beddelidda u dhexeeya codsiyada kaliya desktop -ka hadda jira adigoo riixaya Super + isku darka Tab.
Dheeraad ah abka cusub ee Xiriirada ayaa lagu daray iyada oo la hirgelinayo macmiilka isku xirka desktop -ka fog iyadoo la adeegsanayo borotokoolka VNC iyo RDP. Codsigu wuxuu beddelayaa shaqeynta gelitaanka desktop -ka fog ee horay loogu bixiyay Sanduuqyada.
Qaab -dhismeedka miyuusigga GNOME Music ayaa dib loo qaabeeyey, kaas oo lagu kordhiyay baaxadda garaafyada, geesaha ayaa la soo koobay, bandhigga sawirrada fannaaniinta ayaa lagu daray, guddigii xakamaynta dib -u -ciyaaridda ayaa dib loo habeeyay.
Saldhigga koodhka maamulaha daaqadda Mutter ayaa la nadiifiyay si loo hagaajiyo hufnaanta loona fududeeyo dayactirka.
Waxqabadka interface -ka la hagaajiyay iyo wax -qabadka.
Fadhi ku salaysan Wayland, xawaaraha cusboonaysiinta macluumaadka shaashadda ayaa la kordhiyay waxaana la soo gaabiyey waqtiga falcelinta ee furayaasha iyo dhaq-dhaqaaqa.
Hagaajinta kalsoonida iyo saadaalinta maaraynta tilmaamaha taabashada badan.
Maareeyaha faylka Nautilus, wada-hadalka maareynta isku-buuqa ayaa dib loo qaabeeyey waxaana lagu daray awoodda abuurista keydadka ZIP-ga ee sirta ah.
Jadwalka qorsheeyaha ayaa hadda taageeraya soo dejinta dhacdooyinka iyo furitaanka faylasha ICS.
Tilmaamo cusub ayaa la soo jeediyay oo ku saabsan macluumaadka ku saabsan dhacdada.
Browserka Epiphany wuxuu cusboonaysiiyay fiidiyaha PDF-ka ee PDF.js wuxuuna ku daray xayeysiiska xayeysiiska YouTube ee ku saleysan qoraalka AdGuard.
Guddi cusub oo ah Shabakadda Mobile -ka ayaa lagu daray si loo maareeyo isku -xirka iyada oo loo marayo hawl -wadeennada gacanta.
Is -dhexgalka xisaabiyaha ayaa gabi ahaanba dib loo habeeyay, hadda wuxuu si otomaatig ah ula qabsanayaa cabirka shaashadda ee aaladaha mobilada.
Taageero lagu daray qaybaha nidaamka wargelinta.
GDM wuxuu hadda awood u leeyahay inuu bilaabo kal-fadhiyo ku-saleysan Wayland xitaa haddii shaashadda gelitaanka ay ku saleysan tahay X.Org.
Kulamada Wayland waxaa loo oggol yahay nidaamyada leh NVIDIA GPU -yada.
Disk -ga Gnome wuxuu u adeegsadaa LUKS2 sir -gelinta. Waxaa lagu daray wada hadal si loo habeeyo milkiilaha FS.
Sanduuqyada GNOME waxay ku daraan taageerida ka ciyaarista maqalka bay'adaha adeegsada VNC si ay isugu xirmaan.
Sida loo helo ama loo tijaabiyo nooca cusub ee Gnome 41?
Kuwa xiiseynaya qiimeyn deg deg ah oo ku saabsan awoodaha GNOME 41, dhismayaal nool oo khaas ah oo ku saleysan openSUSE iyo sawir rakibaad oo loo diyaariyey qeyb ka mid ah hindisaha nidaamka hawlgalka GNOME ayaa la bixiyaa, GNOME 41 ayaa sidoo kale lagu daray Fedora 35 dhisme tijaabo ah.
Iyada oo qayb ka ah baakadaha qaybinta kala duwan, kuwani waxay ku iman doonaan saacado gudahood bakhaarrada kuwan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » GNOME 41 wuxuu la imanayaa dib -u -habeyn dib -u -habeyn ah, guddiyo, barnaamijyo iyo waxyaabo kaloo badan
Linux Batocera: Qaybinta Ciyaarta Retro ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah